Dambudziko reMvura muHarare Rozeyiwa neKomiti yeParamende
Mbudzi 23, 2021
Boreholes and Water Situation Zimbabwe No Water
Vakuru vakuri mubazi rezvematunhu nemadhorobha pamwe nemukanzuru yeHarare vanoti kuvandudzwa kweguta pasina kuvaka madhamu pamwe nekuvandudza zvigayo zvemvura ndizvo zviri kukonzera dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare.
Vachipa humbowo kuparamende zvichitevera chichemo chakakwidzwa kuparamende nevamwe vagari vekuBuduriro chekuti kunzuru yeHarare irikutyora kodzero dzavo nekuvashaisa mvura,vakafanobata chinzvimbo chemunyori wekanzuru yeHarare, Engineer Phakamile Moyo, vati ichokwadi kuti kanzuru iri kutadza kupa vagari mvura yakakwana nekuti mvura yaiiri kugaya ishoma pane inodiwa neguta rese.
Vati izvi zviri kukonzerwa nekuti mvura yave shoma muHarare, zvigayo zvemvura zvishoma uye zvasakara. Vatiwo mapaipi emvura asakara zvekuti mvura yakawanda iri kurasika mupaipi aya.
VaMoyo vati Harare inoda mvura inoita ma megarita chiuru nemazana maviri pazuva (1 200 megalitres) asi vakati vari kugaya mvura inoita mamegarita mazana matatu nemakumi maviri (320 megalitres.)
Vati Harare inokwanisa kugaya mamegarita mazana manomwe (700 mgalitres) pazuva kana zvinhu zvakanaka.
Vati nenyaya yekushomeka kwemvura, misha inogara vashoma yave kuwana mvura mazuva maviri pasvondo misha inogara vakawanda ichiwansa mvura mazuva mashanu pasvondo.
Pachichemo chevagari vekuBudiriro, kudzimba dzeCABS, VaMoyo vati pakavandudzwa musha uyu pachivakwa dzimwe dzimba zviuru zvishanu, chigayo chemvura chaifanira kushandiswa nedzimba idzi hachina kuvakwa zvakanaka izvo zvave kuita kuti nzvimbo iyi iwane mvura kubva kuchigayo chinoshandiswa nemimwe misha yose yeBudiriro.
Mumiriri weBudiriro muNational Assembly avo vanovewo nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu, VaCosta Machingauta, veMDC Alliance, varatidza kusafara nemashoko ataurwa naVaMoyo vachiti nyaya yekushaikwa kwemvura yave kukonzera zvirwere munzvimbo iyi.
Sachigaro wekomiti inoona nezvematunhu, Revered Miriam Chikukwa veZanu PF, vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mvura inouya pakati pehusiku mumisha yakawanda.
Asi VaMoyo vati nyaya yekuti mvura inouya nguvai inoenderana nemamiriro akaita nzvimbo vachiti nzvimbo dzakakwirira ndidzo ndinonoka kuwana mvura.
VaMoyo vati vanovimba kuti dambudziko remvura muHarare rinogona kupera chete kana madhamu eKunzvi neMusami achinge avakwa.
Vatiwo kanzuru ichishanda nemamwe masangano anobatsira pamwe nerutsigiro rwairi kuwana kubva kuHarare pasi pemari dzekuvandudza matunhu kana kuti Devolution vari kuvandudza zvigayo zvemvura pamwe nekutenga mapaipi matsva.
Mukuru anoona neezvemadhorobha nematunhu mubazi rezvematunhu, VaMike Mazai, vati zviri pachena kuti nyaya yekuramba pachivakwa dzimba pasingavakwe madhamu nezvigayo zvemvura ndiyo iri kukonzera dambudziko remvura muHarare.
Vati hurumende iri kutsigira kanzuru yeHarare kuti iwanise vanhu mvura yakachena.
Asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara chikwereti kukanzuru icho chave kudarika mabhiriyoni gumi nemazana manomwe emamamiriyoni emaRTGS.
Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita saVaJoel Gabuza veMDC Alliance havana kufara nehumbowo hwekanzuru yeHarare vachiti vange vachinzwa kuti dambudziko remvura muHarare riri kugadziriswa kubva muna 2013 asi riri kutowedzera.
Pabhaketi rayo remabhiriyoni makumi mana nemana regore rinouya, kanzuru yeHarare inoti mari zhinji ichaenda kumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena.
Vamwe Vatori veNhau Vanonzi Vari Kuda Chivharamuromo Kuiti Vasaburitse Zvakaipa